အဖှဲ့ဝငျနိုငျငံမြားအခငျြးခငျြးအကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ ဖွဈပျေါလာနိုငျသညျ့ တငျးမာမှုမြားကိုလြော့ခနြိုငျရနျ ယုံကွညျမှုမြား တညျဆောကျရေးအတှကျ မိမိတို့ အခငျြးခငျြးပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြားကိုယခုထကျပိုမို၍ နကျနကျရှိုငျးရှိုငျး ဆောငျရှကျသှားကွရမညျဖွဈ » ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ
မတျ ၈၊ ၂၀၁၈ မေ ၃၀၊ ၂၀၂၀
နေပြည်တော်၊ မတ် – ၈
အာဆီယံ၏ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သည့် ”One Vision, One Identity, One Community ” အတိုင်းမိမိတို့၏ မတူကွဲပြားမှု များကိုလိုက်လျောညီထွေမှုရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအချင်းချင်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် တင်းမာမှုများကိုလျော့ချနိုင်ရန် ယုံကြည်မှုများတည်ဆောက်ရေးအတွက် မိမိတို့အချင်းချင်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများကိုယခုထက်ပိုမို၍ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ဆောင်ရွက်သွားကြရမည်ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ The Fullerton ဟိုတယ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့်(၁၅)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံတပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်များအလွတ်သဘောအစည်းအဝေး (15th ACDFIM) တွင်ဆွေးနွေးပြောကြားရာ၌ ထည့်သွင်းပြောကြားသည်။
အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် မြန်မာ့တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များ၊ အာဆီယံတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်များနှင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ကြသည်။ ဦးစွာအစည်းအဝေးသဘာပတိ စင်ကာပူတပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် Lt. Gen. Perry Lim က(၁၅)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်များ အလွတ်သဘောအစည်းအဝေး (15th ACDFIM) အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားသည်။ ထို့နောက် အာဆီယံတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်များ အလွတ်သဘောအစည်းအဝေး (15th ACDFIM) ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းအားကြည့်ရှုကြသည်။
ဆက်လက်ပြီး 15th ASEAN Military Intelligence Informal Meeting အစည်းအဝေးရလဒ်အား စင်ကာပူတပ်မတော်ထောက်လှမ်းရေးမှူးချုပ် Bri. Gen. Ong Tze-Ch’in ကလည်းကောင်း၊ 8th ASEAN Military Operations Informal Meeting ၏ရလဒ်အား စင်ကာပူတပ်မတော်ပူးတွဲစစ်ဆင်ရေးမှူးချုပ် Bri. Gen. Tan Chee Wee ကလည်းကောင်း အသီးသီးတင်ပြကြသည်။
ယင်းနောက် အစည်းအဝေးသဘာပတိ စင်ကာပူတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Lt. Gen. Perry Lim ဦးဆောင်၍ အာဆီယံနိုင်ငံများမှ တပ်မတော်အကြီးအကဲများက သက်ဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်များအားနိုင်ငံအက္ခရာစဉ်အလိုက်ဆွေးနွေးကြသည်။
ထိုသို့ဆွေးနွေးရာတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က မိမိအနေဖြင့် “အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေး” ဆိုသည့် ခေါင်းစဉ်ဖြင့် တင်ပြဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အာဆီယံအဖွဲ့ကြီးအား တည်ထောင်လာခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၅၀ အတွင်းကြုံတွေ့လာရသည့် စိန်ခေါ်မှုများကိုအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား စည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့် လက်တွဲဆောင် ရွက်ခဲ့ကြကြောင်း၊ စိန်ခေါ်မှုများကိုရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ကြသော်လည်း အချို့သောစိန်ခေါ်မှုများကိုအောင်မြင်စွာ ဆက်လက်ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်ရန်အတွက် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ ဆောင်ရွက်ကြရန်လိုအပ်နေသေးသည့်အပြင် ဆောင်ရွက်သည့်နည်းလမ်းများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလည်း ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန် လိုအပ်နေသေးကြောင်း၊ စိန်ခေါ်မှုများအားအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ရေးအတွက် အာဆီယံ၏ ဒေသတွင်း ဆိုင်ရာအကြီးမားဆုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖြစ် အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေး (Confidence Building Measures -CBMs) ကိုဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်လာပါကြောင်းပြောကြားသည်။
ထို့နောက် အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံတည်းသော်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံချင်းသော်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံအများအပြားကြားတွင်လည်းကောင်း စစ်ရေးအရတင်းမာမှုများကိုလျော့ချနိုင်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ရသည့် လှုပ်ရှားမှုများနှင့် လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်များဖြစ်ပါကြောင်း၊ လက်တွေ့အားဖြင့်လည်း နိုင်ငံများအချင်းချင်းကြားတွင် နိုင်ငံအလိုက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပုံနည်းလမ်းများကို ကြိုတင်တွက်ဆကာပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ကြရပါကြောင်း၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင်အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နေသည့် ပုံစံများစွာရှိနေသော်လည်း ကူးလူးဆက်ဆံဆောင်ရွက်ခြင်း (Communication) ၊ အကန့်အသတ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း (Constraint) ၊ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာဆောင်ရွက်ခြင်း (Transparency) ၊ အတည်ပြုဆောင်ရွက်ခြင်း (Verification) စသည်ဖြင့် ယေဘုယျအားဖြင့် အဓိကနယ်ပယ် ကြီး ၄ ရပ်သာရှိပါကြောင်း၊ အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးကို အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းအားဖြင့် ပိုမိုနားလည်မှုရှိသည့် သဘောတူညီချက်များရရှိ နိုင်ရေးအတွက်ရှေ့ပြေးအထောက်အပံ့ ဖြစ်စေနိုင်သည့်အပြင်ယုံကြည်မှုများ တိုးတက်ခိုင်မာစေခြင်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုလည်းပိုမိုနည်းလမ်းတကျ အကောင်အထည် ဖော်စေနိုင်ရန်အတွက်လည်းအထောက်အကူဖြစ်စေပါကြောင်း၊ ထို့အပြင်နိုင်ငံရေးအရ အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုများ တည်ဆောက်နိုင်ခြင်းသည်လည်း စစ်ရေးအရတင်းမာမှုများ ဖြစ်နိုင်မှုကိုလျော့ချရန် အလွန်အရေးပါကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
ဆက်လက်ပြီး အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအချင်းချင်း နိုင်ငံရေးနှင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို အောင်မြင်စွာ ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် မိမိတို့အနေဖြင့် အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးအပြင် ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်စွမ်းသောသံခင်းတမန်ခင်းအား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါကြောင်း၊ အဆိုပါအချက်နှစ်ချက်ကို အောင်မြင်စွာအကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ ပဋိပက္ခများအားဖြေရှင်းခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထိုသို့အဆင့်သုံးဆင့်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပြီးပါက အာဆီယံဒေသအတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်ရေးကို ကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားသည်။
ထို့နောက် ယနေ့ကမ္ဘာကြီးသည်သမားရိုးကျလုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများအပြင် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုများ၊ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ၊ သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေး၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၊ လူထုကျန်းမာရေး စသည့်သမားရိုးကျမဟုတ်သောလုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုမြောက်များစွာနှင့်လည်း ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရကြောင်း၊ ထို့အပြင် စိန်ခေါ်မှုပုံစံအသစ်ဖြစ်သည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးပြဿနာများကိုလည်းရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသောသမားရိုးကျလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကိုကြုံ တွေ့နေရကြောင်း၊ အထူးသဖြင့်တရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုများမှတဆင့် ဒေသတွင်း၌ အကြမ်းဖက်မှုများလုပ်ဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဝင်ရောက်လာနိုင်သောအစွန်းရောက်အဖွဲ့အစည်းများအား အချိန်မီတားဆီးနိုင်ရေး သတင်းအချက်အလက်များဖလှယ်ရန်နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် ဒေသတွင်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် အထူးအလေးထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏တပ်မတော်များအနေဖြင့်လည်း သမားရိုးကျနှင့် သမားရိုးကျမဟုတ်သော လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကိုရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်ရန်အတွက်အဖက်ဖက်မှ ကြိုတင်ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ မိမိတို့အနေဖြင့် အမြဲသတိရှိနေရန်လိုအပ်ပြီးဒေသတွင်းတည်ငြိမ်ရေး၊ လုံခြုံရေးနှင့် ပြည်သူများငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သမားရိုးကျနှင့် သမားရိုးကျမဟုတ်သော လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ကောင်းမွန်သောရလဒ်များ ပေါ်ထွက်လာစေရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်လျက်ရှိကြောင်းပြောကြားသည်။
၎င်းနောက်အနာဂတ်လုံခြုံရေး ပတ်ဝန်းကျင်တည်ငြိမ်ခိုင်မာလာစေရန် စိန်ခေါ်မှုများနှင့်နက်နဲရှုပ်ထွေးမှုများကို တစ်နိုင်ငံတည်းရင်ဆိုင်ကျော်လွှားရန်မဖြစ်နိုင်ဘဲ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ စည်းလုံးညီညွတ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်သာ ကျော်လွှားအောင်မြင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် မိမိတို့ရင်ဆိုင်နေရသည့်အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ဆက်စပ်သောစိန်ခေါ်မှုများကိုတုံ့ပြန်ဆောင် ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသည် လွတ်လပ်၍တက်ကြွပြီး ဘက်မလိုက်သော နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကိုကျင့်သုံးပြီး ယင်းမူဝါဒမှာကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် နိုင်ငံအချင်းချင်း မိတ်ဝတ်မပျက်ပေါင်းဖက်ဆက်ဆံရေးကိုရှေးရှု၍ နိုင်ငံအချင်းချင်းငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးမူများကို စောင့်ထိန်းသည့်မူဝါဒဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါနိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒအရ မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများနှင့်သာမက အခြားကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးနှင့်ပါ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိုအားကြိုးမာန်တက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
ဆက်လက်ပြီး မိမိတို့အာဆီယံအဖွဲ့ကြီးသည်ဒေသတွင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် မည်သည့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကိုမဆို စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် စုပေါင်းတာဝန်ယူမှုများရှိနေသည့် အသိုက်အဝန်းဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ အာဆီယံ ဒေသဆိုင်ရာဖိုရမ်နှင့် အာဆီယံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးများမှတဆင့် အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရေး (Confidence Building Measures -CBMs) ကိုဖော်ဆောင်ရေး အတွက်အလေးထားကြိုးစားအားထုတ်နေကြပါကြောင်း၊ ထိုသို့ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခြင်းမရှိပါကလည်း သမားရိုးကျနှင့် သမားရိုးကျမဟုတ်သောလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေရဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့အနေဖြင့် ပဋိပက္ခများဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနှင့်တင်းမာမှုများ အားလျော့ချနိုင်ရေးအတွက် အာဆီယံ၏စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက် လက်ရှိမိမိတို့ အာဆီယံဒေသတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသောပဋိပက္ခများ(သို့မဟုတ်) အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများရင်ဆိုင်ရဖွယ်ရှိသည့် စိန်ခေါ်မှုများကို ဆန်းစစ်မှုများသေချာစွာ ပြုလုပ်သွားရန်လည်း လိုအပ်နေသေးကြောင်း၊ ထို့အပြင် မိမိတို့ဒေသတွင်းအားရိုက်ခတ်လာနိုင်သည့် အခြားဒေသများ၌ရင်ဆိုင်နေရသည့် စိန်ခေါ်မှုများကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစား သွားရန်လိုကြောင်းတိုက်တွန်းပြောကြားသည်။
၎င်းနောက် အာဆီယံတပ်မတော်များ၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ နှစ်နှစ်လုပ်ငန်းစီမံချက် အားဆွေးနွေးကြပြီး (၁၅)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်များ အလွတ်သဘောအစည်းအဝေး (15th ACDFIM) ပူးတွဲကြေငြာချက် အားလက်မှတ် ရေးထိုးကြသည်။ ထို့နောက်စင်ကာပူတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က နိဂုံးချုပ်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားပြီး (၁၆)ကြိမ်မြောက်အာဆီယံတပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်များ အလွတ်သဘောအစည်းအဝေး (16th ACDFIM) ကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံ ကျင်းပမည့် ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Gen. Tarnchaiyan Srisuwan ထံသို့ တာဝန်လွှဲပြောင်းပေးအပ်သည်။
ယင်းနောက်ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Gen. Tarnchaiyan Srisuwan က လက်ခံနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားပြီး အစည်းအဝေးအားရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။
ဆက်လက်ပြီးတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်သည် ညနေပိုင်းတွင် ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Gen. Tarnchaiyan Srisuwan နှင့်လည်းကောင်း၊ မလေးရှားတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Gen. Tan Sri Raja Mohamed Affandi Bin Raja Mohamed Noor နှင့်လည်းကောင်း နိုင်ငံအလိုက် သီးခြားစီတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရေး၊ သင်တန်းသားများ အပြန်အလှန် စေလွှတ်ရေးနှင့် အဆင့်အလိုက်ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်များ အပြန်အလှန်လည်ပတ်ရေး ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲများအပြီးတွင်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၊ မလေးရှားတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့နှင့် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများအပြန်အလှန်ပေးအပ်ပြီး စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြသည်။
နပွေညျတျော၊ မတျ – ၈
အာဆီယံ၏ဆောငျပုဒျဖွဈသညျ့ ”One Vision, One Identity, One Community ” အတိုငျးမိမိတို့၏ မတူကှဲပွားမှု မြားကိုလိုကျလြောညီထှမှေုရှိအောငျဆောငျရှကျကွရမညျဖွဈကွောငျး၊ အဖှဲ့ဝငျနိုငျငံမြားအခငျြးခငျြးအကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ ဖွဈပျေါလာနိုငျသညျ့ တငျးမာမှုမြားကိုလြော့ခနြိုငျရနျ ယုံကွညျမှုမြားတညျဆောကျရေးအတှကျ မိမိတို့အခငျြးခငျြးပူးပေါငျး ဆောငျရှကျမှုမြားကိုယခုထကျပိုမို၍ နကျနကျရှိုငျးရှိုငျး ဆောငျရှကျသှားကွရမညျဖွဈကွောငျးဖွငျ့ တပျမတျောကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျက ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ စငျကာပူနိုငျငံရှိ The Fullerton ဟိုတယျ၌ ကငျြးပပွုလုပျသညျ့(၁၅)ကွိမျမွောကျ အာဆီယံတပျမတျောကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျမြားအလှတျသဘောအစညျးအဝေး (15th ACDFIM) တှငျဆှေးနှေးပွောကွားရာ၌ ထညျ့သှငျးပွောကွားသညျ။
အဆိုပါအစညျးအဝေးသို့တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျနှငျ့ မွနျမာ့တပျမတျော ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့ဝငျမြား၊ အာဆီယံတပျမတျော ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျမြားနှငျ့ ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့ဝငျမြားတကျရောကျကွသညျ။ ဦးစှာအစညျးအဝေးသဘာပတိ စငျကာပူတပျမတျောကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျ Lt. Gen. Perry Lim က(၁၅)ကွိမျမွောကျ အာဆီယံတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျမြား အလှတျသဘောအစညျးအဝေး (15th ACDFIM) အဖှငျ့အမှာစကား ပွောကွားသညျ။ ထို့နောကျ အာဆီယံတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျမြား အလှတျသဘောအစညျးအဝေး (15th ACDFIM) ဗီဒီယိုမှတျတမျးအားကွညျ့ရှုကွသညျ။
ဆကျလကျပွီး 15th ASEAN Military Intelligence Informal Meeting အစညျးအဝေးရလဒျအား စငျကာပူတပျမတျောထောကျလှမျးရေးမှူးခြုပျ Bri. Gen. Ong Tze-Ch’in ကလညျးကောငျး၊ 8th ASEAN Military Operations Informal Meeting ၏ရလဒျအား စငျကာပူတပျမတျောပူးတှဲစဈဆငျရေးမှူးခြုပျ Bri. Gen. Tan Chee Wee ကလညျးကောငျး အသီးသီးတငျပွကွသညျ။
ယငျးနောကျ အစညျးအဝေးသဘာပတိ စငျကာပူတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ Lt. Gen. Perry Lim ဦးဆောငျ၍ အာဆီယံနိုငျငံမြားမှ တပျမတျောအကွီးအကဲမြားက သကျဆိုငျရာခေါငျးစဉျမြားအားနိုငျငံအက်ခရာစဉျအလိုကျဆှေးနှေးကွသညျ။
ထိုသို့ဆှေးနှေးရာတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျက မိမိအနဖွေငျ့ “အာဆီယံ အဖှဲ့ဝငျနိုငျငံမြားအကွားပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြားပွုလုပျခွငျးဖွငျ့ အပွနျအလှနျယုံကွညျမှုတညျဆောကျရေး” ဆိုသညျ့ ခေါငျးစဉျဖွငျ့ တငျပွဆှေးနှေးသှားမညျဖွဈကွောငျး၊ အာဆီယံအဖှဲ့ကွီးအား တညျထောငျလာခဲ့သညျ့ နှဈပေါငျး ၅၀ အတှငျးကွုံတှလေ့ာရသညျ့ စိနျချေါမှုမြားကိုအာဆီယံအဖှဲ့ဝငျနိုငျငံမြားအကွား စညျးလုံးညီညှတျစှာဖွငျ့ လကျတှဲဆောငျ ရှကျခဲ့ကွကွောငျး၊ စိနျချေါမှုမြားကိုရငျဆိုငျကြျောလှားနိုငျခဲ့ကွသျောလညျး အခြို့သောစိနျချေါမှုမြားကိုအောငျမွငျစှာ ဆကျလကျရငျဆိုငျကြျောလှားနိုငျရနျအတှကျ အာဆီယံအဖှဲ့ဝငျနိုငျငံမြားအကွား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြားကို ပိုမိုနကျရှိုငျးစှာ ဆောငျရှကျကွရနျလိုအပျနသေေးသညျ့အပွငျ ဆောငျရှကျသညျ့နညျးလမျးမြားနှငျ့ လုပျထုံးလုပျနညျးမြားကိုလညျး ပွနျလညျဆနျးစဈရနျ လိုအပျနသေေးကွောငျး၊ စိနျချေါမှုမြားအားအောငျမွငျစှာကြျောလှားနိုငျရေးအတှကျ အာဆီယံ၏ ဒသေတှငျး ဆိုငျရာအကွီးမားဆုံးပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုအဖွဈ အပွနျအလှနျယုံကွညျမှုတညျဆောကျရေး (Confidence Building Measures -CBMs) ကိုဦးစားပေး ဆောငျရှကျရနျလိုအပျလာပါကွောငျးပွောကွားသညျ။
ထို့နောကျ အပွနျအလှနျယုံကွညျမှုတညျဆောကျရေးဆိုသညျမှာ သကျဆိုငျရာနိုငျငံ တဈနိုငျငံတညျးသျောလညျးကောငျး၊ နိုငျငံခငျြးသျောလညျးကောငျး၊ နိုငျငံအမြားအပွားကွားတှငျလညျးကောငျး စဈရေးအရတငျးမာမှုမြားကိုလြော့ခနြိုငျရေးအတှကျ လုပျဆောငျရသညျ့ လှုပျရှားမှုမြားနှငျ့ လုပျငနျးအဆငျ့ဆငျ့မြားဖွဈပါကွောငျး၊ လကျတှအေ့ားဖွငျ့လညျး နိုငျငံမြားအခငျြးခငျြးကွားတှငျ နိုငျငံအလိုကျလုပျကိုငျဆောငျရှကျပုံနညျးလမျးမြားကို ကွိုတငျတှကျဆကာပွငျဆငျဆောငျရှကျကွရပါကွောငျး၊ ကမ်ဘာပျေါတှငျအပွနျအလှနျ ယုံကွညျမှုတညျဆောကျရေးနှငျ့ပတျသကျ၍အောငျမွငျစှာဆောငျရှကျနသေညျ့ ပုံစံမြားစှာရှိနသေျောလညျး ကူးလူးဆကျဆံဆောငျရှကျခွငျး (Communication) ၊ အကနျ့အသတျဖွငျ့ဆောငျရှကျခွငျး (Constraint) ၊ ပှငျ့လငျးမွငျသာစှာဆောငျရှကျခွငျး (Transparency) ၊ အတညျပွုဆောငျရှကျခွငျး (Verification) စသညျဖွငျ့ ယဘေုယအြားဖွငျ့ အဓိကနယျပယျ ကွီး ၄ ရပျသာရှိပါကွောငျး၊ အပွနျအလှနျယုံကွညျမှုတညျဆောကျရေးကို အကောငျအထညျဖျေါဆောငျရှကျနိုငျခွငျးအားဖွငျ့ ပိုမိုနားလညျမှုရှိသညျ့ သဘောတူညီခကျြမြားရရှိ နိုငျရေးအတှကျရှပွေ့ေးအထောကျအပံ့ ဖွဈစနေိုငျသညျ့အပွငျယုံကွညျမှုမြား တိုးတကျခိုငျမာစခွေငျးနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြားကိုလညျးပိုမိုနညျးလမျးတကြ အကောငျအထညျ ဖျောစနေိုငျရနျအတှကျလညျးအထောကျအကူဖွဈစပေါကွောငျး၊ ထို့အပွငျနိုငျငံရေးအရ အပွနျအလှနျယုံကွညျမှုမြား တညျဆောကျနိုငျခွငျးသညျလညျး စဈရေးအရတငျးမာမှုမြား ဖွဈနိုငျမှုကိုလြော့ခရြနျ အလှနျအရေးပါကွောငျး ရှငျးလငျးပွောကွားသညျ။
ဆကျလကျပွီး အာဆီယံအဖှဲ့ဝငျနိုငျငံမြားအခငျြးခငျြး နိုငျငံရေးနှငျ့လုံခွုံရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြားကို အောငျမွငျစှာ ဖွရှေငျးနိုငျရနျအတှကျ မိမိတို့အနဖွေငျ့ အပွနျအလှနျ ယုံကွညျမှုတညျဆောကျရေးအပွငျ ကွိုတငျကာကှယျနိုငျစှမျးသောသံခငျးတမနျခငျးအား ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျစရေနျအတှကျ ဆောငျရှကျရနျလိုအပျပါကွောငျး၊ အဆိုပါအခကျြနှဈခကျြကို အောငျမွငျစှာအကောငျအထညျ ဖျောဆောငျရှကျပွီးမှသာ ပဋိပက်ခမြားအားဖွရှေငျးခွငျးကို ဆောငျရှကျရမညျဖွဈပါကွောငျး၊ ထိုသို့အဆငျ့သုံးဆငျ့ကို အကောငျအထညျဖျောဆောငျရှကျပွီးပါက အာဆီယံဒသေအတှငျးငွိမျးခမျြးရေးနှငျ့တညျငွိမျရေးကို ကောငျးမှနျစှာထိနျးသိမျးနိုငျမညျဖွဈကွောငျးပွောကွားသညျ။
ထို့နောကျ ယနကေ့မ်ဘာကွီးသညျသမားရိုးကလြုံခွုံရေးဆိုငျရာစိနျချေါမှုမြားအပွငျ နယျစပျဖွတျကြျောရာဇဝတျမှုမြား၊ အကွမျးဖကျတိုကျခိုကျမှုမြား၊ သဘာဝဘေးအန်တရာယျမြား၊ သတငျးအခကျြအလကျဆိုငျရာလုံခွုံရေး၊ ရာသီဥတုပွောငျးလဲမှု၊ လူထုကနျြးမာရေး စသညျ့သမားရိုးကမြဟုတျသောလုံခွုံရေးဆိုငျရာစိနျချေါမှုမွောကျမြားစှာနှငျ့လညျး ရငျဆိုငျကွုံတှနေ့ရေကွောငျး၊ ထို့အပွငျ စိနျချေါမှုပုံစံအသဈဖွဈသညျ့ နညျးပညာဆိုငျရာ လုံခွုံရေးပွဿနာမြားကိုလညျးရငျဆိုငျ ဖွရှေငျးရနျကွိုတငျပွငျဆငျထားရမညျဖွဈကွောငျး၊ လကျရှိမွနျမာနိုငျငံအနဖွေငျ့ ရငျဆိုငျကွုံတှနေ့ရေသောသမားရိုးကလြုံခွုံရေးဆိုငျရာ စိနျချေါမှုမြားကိုကွုံ တှနေ့ရေကွောငျး၊ အထူးသဖွငျ့တရားမဝငျရှပွေ့ောငျးနထေိုငျမှုမြားမှတဆငျ့ ဒသေတှငျး၌ အကွမျးဖကျမှုမြားလုပျဆောငျရနျ ရညျရှယျခကျြဖွငျ့ ဝငျရောကျလာနိုငျသောအစှနျးရောကျအဖှဲ့အစညျးမြားအား အခြိနျမီတားဆီးနိုငျရေး သတငျးအခကျြအလကျမြားဖလှယျရနျနှငျ့ စဉျဆကျမပွတျစောငျ့ကွညျ့နိုငျရနျအတှကျ ဒသေတှငျးထောကျလှမျးရေးအဖှဲ့အစညျးမြားအနဖွေငျ့ အထူးအလေးထားဆောငျရှကျလကျြရှိပါကွောငျး၊အာဆီယံအဖှဲ့ဝငျနိုငျငံမြား၏တပျမတျောမြားအနဖွေငျ့လညျး သမားရိုးကနြှငျ့ သမားရိုးကမြဟုတျသော လုံခွုံရေးဆိုငျရာစိနျချေါမှုမြားကိုရငျဆိုငျကြျောလှားနိုငျရနျအတှကျအဖကျဖကျမှ ကွိုတငျပွငျဆငျ ဆောငျရှကျလကျြရှိကွောငျး၊ မိမိတို့အနဖွေငျ့ အမွဲသတိရှိနရေနျလိုအပျပွီးဒသေတှငျးတညျငွိမျရေး၊ လုံခွုံရေးနှငျ့ ပွညျသူမြားငွိမျးခမျြးစှာနထေိုငျနိုငျရေးအတှကျ ဆောငျရှကျသှားရမညျဖွဈကွောငျး၊ သမားရိုးကနြှငျ့ သမားရိုးကမြဟုတျသော လုံခွုံရေးဆိုငျရာစိနျချေါမှုမြားကိုရငျဆိုငျဖွရှေငျးရာတှငျ မွနျမာနိုငျငံအနဖွေငျ့ ကောငျးမှနျသောရလဒျမြား ပျေါထှကျလာစရေေးကွိုးပမျးအားထုတျလကျြရှိကွောငျးပွောကွားသညျ။
၎င်းငျးနောကျအနာဂတျလုံခွုံရေး ပတျဝနျးကငျြတညျငွိမျခိုငျမာလာစရေနျ စိနျချေါမှုမြားနှငျ့နကျနဲရှုပျထှေးမှုမြားကို တဈနိုငျငံတညျးရငျဆိုငျကြျောလှားရနျမဖွဈနိုငျဘဲ အဖှဲ့ဝငျနိုငျငံမြား၏ စညျးလုံးညီညှတျစှာ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျခွငျးဖွငျ့သာ ကြျောလှားအောငျမွငျနိုငျမညျဖွဈကွောငျး၊ တဈနိုငျငံနှငျ့တဈနိုငျငံညှိနှိုငျးပူးပေါငျးဆောငျရှကျခွငျးအားဖွငျ့ မိမိတို့ရငျဆိုငျနရေသညျ့အကွမျးဖကျမှုနှငျ့ ဆကျစပျသောစိနျချေါမှုမြားကိုတုံ့ပွနျဆောငျ ရှကျနိုငျမညျဖွဈကွောငျး၊ မွနျမာနိုငျငံသညျ လှတျလပျ၍တကျကွှပွီး ဘကျမလိုကျသော နိုငျငံခွားရေးမူဝါဒကိုကငျြ့သုံးပွီး ယငျးမူဝါဒမှာကမ်ဘာ့ငွိမျးခမျြးရေးနှငျ့ နိုငျငံအခငျြးခငျြး မိတျဝတျမပကျြပေါငျးဖကျဆကျဆံရေးကိုရှေးရှု၍ နိုငျငံအခငျြးခငျြးငွိမျးခမျြးစှာအတူယှဉျတှဲနထေိုငျရေးမူမြားကို စောငျ့ထိနျးသညျ့မူဝါဒဖွဈကွောငျး၊ အဆိုပါနိုငျငံခွားရေးမူဝါဒအရ မွနျမာနိုငျငံသညျ ဒသေတှငျးနိုငျငံမြားနှငျ့သာမက အခွားကမ်ဘာ့နိုငျငံအသီးသီးနှငျ့ပါ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးကိုအားကွိုးမာနျတကျဆောငျရှကျလကျြရှိကွောငျးရှငျးလငျးပွောကွားသညျ။
ဆကျလကျပွီး မိမိတို့အာဆီယံအဖှဲ့ကွီးသညျဒသေတှငျးဖွဈပျေါလာနိုငျသညျ့ မညျသညျ့လုံခွုံရေးဆိုငျရာစိနျချေါမှုမြားကိုမဆို စညျးလုံးညီညှတျမှု၊ ငွိမျးခမျြးရေးနှငျ့ စုပေါငျးတာဝနျယူမှုမြားရှိနသေညျ့ အသိုကျအဝနျးဖွဈသညျ့အားလြျောစှာ အာဆီယံ ဒသေဆိုငျရာဖိုရမျနှငျ့ အာဆီယံကာကှယျရေးဝနျကွီးမြားအစညျးအဝေးမြားမှတဆငျ့ အပွနျအလှနျယုံကွညျမှု တညျဆောကျရေး (Confidence Building Measures -CBMs) ကိုဖျောဆောငျရေး အတှကျအလေးထားကွိုးစားအားထုတျနကွေပါကွောငျး၊ ထိုသို့ပူးပေါငျးအကောငျအထညျဖျောနိုငျခွငျးမရှိပါကလညျး သမားရိုးကနြှငျ့ သမားရိုးကမြဟုတျသောလုံခွုံရေးဆိုငျရာ စိနျချေါမှုမြားနှငျ့ဆကျလကျရငျဆိုငျနရေဦးမညျဖွဈကွောငျး၊ မိမိတို့အနဖွေငျ့ ပဋိပက်ခမြားဖွရှေငျးဆောငျရှကျနိုငျရေးနှငျ့တငျးမာမှုမြား အားလြော့ခနြိုငျရေးအတှကျ အာဆီယံ၏စှမျးဆောငျနိုငျရညျကိုမွှငျ့တငျရနျအတှကျ လကျရှိမိမိတို့ အာဆီယံဒသေတှငျး ဖွဈပျေါနသေောပဋိပက်ခမြား(သို့မဟုတျ) အာဆီယံ အဖှဲ့ဝငျနိုငျငံမြားရငျဆိုငျရဖှယျရှိသညျ့ စိနျချေါမှုမြားကို ဆနျးစဈမှုမြားသခြောစှာ ပွုလုပျသှားရနျလညျး လိုအပျနသေေးကွောငျး၊ ထို့အပွငျ မိမိတို့ဒသေတှငျးအားရိုကျခတျလာနိုငျသညျ့ အခွားဒသေမြား၌ရငျဆိုငျနရေသညျ့ စိနျချေါမှုမြားကိုပါ ထညျ့သှငျးစဉျးစား သှားရနျလိုကွောငျးတိုကျတှနျးပွောကွားသညျ။
၎င်းငျးနောကျ အာဆီယံတပျမတျောမြား၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ နှဈနှဈလုပျငနျးစီမံခကျြ အားဆှေးနှေးကွပွီး (၁၅)ကွိမျမွောကျ အာဆီယံတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျမြား အလှတျသဘောအစညျးအဝေး (15th ACDFIM) ပူးတှဲကွငွောခကျြ အားလကျမှတျ ရေးထိုးကွသညျ။ ထို့နောကျစငျကာပူတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက နိဂုံးခြုပျနှုတျခှနျးဆကျစကားပွောကွားပွီး (၁၆)ကွိမျမွောကျအာဆီယံတပျမတျောကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျမြား အလှတျသဘောအစညျးအဝေး (16th ACDFIM) ကိုအိမျရှငျအဖွဈလကျခံ ကငျြးပမညျ့ ထိုငျးဘုရငျ့တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ Gen. Tarnchaiyan Srisuwan ထံသို့ တာဝနျလှဲပွောငျးပေးအပျသညျ။
ယငျးနောကျထိုငျးဘုရငျ့တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ Gen. Tarnchaiyan Srisuwan က လကျခံနှုတျခှနျးဆကျစကားပွောကွားပွီး အစညျးအဝေးအားရုပျသိမျးခဲ့သညျ။
ဆကျလကျပွီးတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျသညျ ညနပေိုငျးတှငျ ထိုငျးဘုရငျ့တပျမတျော ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ Gen. Tarnchaiyan Srisuwan နှငျ့လညျးကောငျး၊ မလေးရှားတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ Gen. Tan Sri Raja Mohamed Affandi Bin Raja Mohamed Noor နှငျ့လညျးကောငျး နိုငျငံအလိုကျ သီးခွားစီတှဆေုံ့ ဆှေးနှေးသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျခဈြကွညျရငျးနှီးမှုတိုးမွှငျ့ဆောငျရှကျရေး၊ သငျတနျးသားမြား အပွနျအလှနျ စလှေတျရေးနှငျ့ အဆငျ့အလိုကျခဈြကွညျရေးခရီးစဉျမြား အပွနျအလှနျလညျပတျရေး ဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားအား ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာဆှေးနှေးခဲ့ ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲမြားအပွီးတှငျတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျသညျ ထိုငျးဘုရငျ့တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ၊ မလေးရှားတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျတို့နှငျ့ အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးမြားအပွနျအလှနျပေးအပျပွီး စုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွသညျ။
ဇနျနဝါရီ ၂၊ ၂၀၁၈ Admin 0